May 19, 2020 1315
मेष: पारिवारिक साथ सहयोगले उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुने देखिन्छ । र्च बढ्ने समय रहेको हुँदा धेरै रकम जोहो गर्नुपर्ला। सोखले विलासी वस्तुहरूमा खर्च ‘गराउनेछ। उठ्नुपर्ने रकम तत्काल उठाउँदा ला’भांशमा घाटा लाग्न सक्छ। आफन्तबाट टाढिनुपरे पनि टा’ढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नेछ। विपरित वर्गबाट विशेष सहयोग मिल्ने’छ । जोश जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ ।
वृष : आज प्रेमीको सहयोग पाईनेछ । काम रोकिए पनि उठ्नुपर्ने रकम प्राप्त हुनेछ। उद्योग र व्यापारमा पनि सामान्य फाइदा हुनेछ। विगतका कर्मको उचित प्रतिफ’ल प्राप्त प्राप्त हु’नेछ। तर समयमा सजग नहुँदा आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। आकस्मिक समस्याले सञ्चित रकम खर्च गराउन सक्छ।नजिकको मित्रसँग भेटघाट हुनेछ । परिवारको साथ सहयोग मिल्नुका सा’थै यात्राका योग पनि देखिन्छन् ।
मिथुन : आज नजिकका व्यक्ति’बाट कार्यमा वाधा आइपर्ला । आजको मिहिनेतले भविष्यमा नाम र प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ। मिहिनेत गर्दा आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ। राम्रो कर्म’फल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। महत्त्वपूर्ण कार्यमा व्यवधान आउ’नसक्छ । अधिक सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ ।
कर्कट : अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । जिम्मेवारी आए पनि उपलब्धिका’ लागि केही समय लाग्ने’छ। अस्वस्थताले काममा जुट्न नसकिएला। सहयोगको आशा देखाउनेहरूबाट धोका हुन सक्छ। आफ्ना कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छ’न्। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। मेहनतअनुसार कम मात्र फल प्राप्त हुनेछ। धर्म,कर्ममा मन लाग्नेछ । गरेका काम’बाट राम्रै लाभ हुनेछ । दैनिक कार्यमा प्रगति हुनेछ ।
सिंह : अस्वस्थ शरीर लिएर काममा जुट्नु’पर्ने अवस्था आउन सक्छ। लगानीमा जोखिम बढ्ने समय छ। गोपनीयता बाहिरिन सक्छ। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउ’नुहोला। श्रम परे पनि मिहिनेतको उचित मूल्य प्राप्त नहोला। प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिना’ले पछिका लागि काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। मन भावु’क र उत्ताउलो बन्नेछ । अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च हुनेछ । जिद्दीपनाले गर्दा काम बिग्रने डर छ । सरकारी निकाएको भयपनि रहला ।
कन्या : परिस्थिति प्रतिकूल रहे पनि मनोरञ्ज’नको समय छ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमा’इलो रहनेछ। भौतिक साधनले जीवनशैलीमा परि’वर्तन ल्याउन सक्छ। आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन क_सिलो हुनेछ। रोकिए’का काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । जोश,जाँगर र उमङ्ग बढ्नेछ । वैदेशिक कार्य अघी बढ्नेछ । साहित्यिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ ।
तुला : लाभ,हानी,आय,व्यय,सुख,दुख वरावरी खालको समय छ । काम बन्नुका साथै भौतिक साधन जुट्ना_ले दिन उत्साहजनक रहनेछ। लगनशीलताले _नयाँ काम गर्ने अवसर दिलाउनेछ। बुद्धिको उपयोगले अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइ’नेछ। शत्रुभाव राख्नेहरू स्वयं कमजोर हुनेछन्। पछिका लागि लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। धार्मि’क कार्यमा रुचि रहनुका साथै सामाजिक पदप्रतिष्ठा प्राप्त हुने देखिन्छ ।
वृश्चिक : आज शुभकार्यको योग छ । छिटो फल प्राप्त गर्ने आकांक्षाले समस्या निम्त्याउनेछ। अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनुपर्ला। समयतालिका नमिल्दा योजना अधुरै रहनेछ। हल्लाको पछि लाग्दा व्यर्थैमा दुस्ख पाइनेछ। आफ्ना काम’बाट अरूले फाइदा उठा’उने चेष्टा गर्लान्। आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । आदर्श ब्यक्तिको सहकार्यले नयाँ अनुभव मिल्नेछ । पढाइमा प्रगति हुनेछ ।
धनु : नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । अना’वश्यक हल्लाको पछि लाग्दा दुस्ख पाइनेछ। प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोर्याउनुपर्ला। बेसुरमा दिइएको वचनले पनि समस्या निम्त्या’उनेछ। साइनो गाँस्नेहरूको भरपर्दा लक्ष्य प्राप्ति नहुन स’क्छ। समयमा सजग नबन्दा शुभचिन्तकहरू समेत टाढिनेछन्।धार्मिक कृत्यमा सहभागी बन्नु पर्नेछ । आफन्त’को प्रगतिमा मन रमाउनेछ । नयाँ कार्य वा रोजगारको अवसर मिल्नेछ ।
मकर : आज सचेत रहनु होला ।सहयोगी’हरूले राम्रो साथ दिनाले चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। गरि’एका कर्मबाट छोटो समयमै उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। विशेष उपहार हातलागी होला। कृ’षिमा कामको चाप र चौपायामा केही समस्या देखिए पनि धन आर्जन प्रशस्तै हुनेछ। निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । मनमा दुवि’धाहरू उत्पन्न हुने’छन् । तर नयाँ कार्यको योजना बन्नसक्छ ।
कुम्भ : एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ । समयमा आफ्नो हक दाबी गर्न नसक्दा कम मात्र लाभांश प्राप्त हुनेछ। आत्तिने बानीले बोलीको गलत अर्थ लाग्न सक्छ। हात’मा आएको रकम अ’रूका लागि खर्चनुपर्नेछ। अरूको मुख ताक्ने बानीले आ’फ्नो काम अधुरो रहनेछ। शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर अघि बढ्नुहोला। बन्धु बान्धवबाट सहयोग मिल्नेछ । राजनैतिक कार्यमा सफल’ता मिल्नेछ । जोश जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ ।
मीन : मिष्ठान्न भोजनको अवसर मिल्नेछ । केही अवसर जुट्नेछ तर आलस्य गर्ने बानीले काम अधुरो रहन सक्छ। पछि’का लागि जग बसाउने समय छ। पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आ’उनेछ भने सहयोगीले साथ दिनेछन्। बिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट हो’ला। पहिलेका कम’जोरी सुधार्दै फाइदा उठाउने समय छ। सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । अरुलाई प्रभावित पारेर काम बन्नेछ । श्रमको उचित मुल्याङ्कन हुनेछ ।
Prevशुष्मा कार्कीले ‘प्रहरी पठाउँछु भन्दै धम्क्याइन्’ पुजाका फ्यान असुरक्षि’त भयौं भन्दै मिडिया’मा (भिडियोसहित)
Nextप्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बोल्दाबोल्दै गार्हो भयो भने पछि….(भिडियो)
पार्किङ गरेर राखेको बसभित्र मध्यरातमा युवायुवती भेटिएपछि…
आज अमेरिकी डलर सहित अन्य देशको मुद्राको भाउ बढ्यो की घट्यो ? हेर्नु`होस्